Aadan Barre Ducaale "Uhuro kenyaata waa nin daarood ah, oo absame kasii ah" Dhageyso.
Dhageyso: Hiiraan iyo Hooska Shareecada Warbixinno taxana ah [Xalqada 1aad].
161 kun American ah oo Cudurka Carona ugu dhintay dalka Mareykanka.
Taliyihii ciidamada ilaalada Saciid Deni oo ku dhintay dagaal ka dhacay Gaalkacyo.
Taliban oo loosii daayay Maxaabiistii looga qabtay dagaalka Afghanistan.
Dhageyso: Puntland oo ka Cabatay Al Shabaab Qalqaalana ugu jirta lacag ay kuu dhisato Sirdoon Dharcad ah.
Faah Faahin: 24 Askari oo ku dhintay Weerarkii Istish-haadiga ahaa ee lagu beegsaday saldhigga guutada 27aad.
Saturday April 01, 2017 - 08:12:36 in Wararka by Super Admin
Idaacadda Islaamiga Alfurqaan ayaa Warbixin ka diyaarisay hadal dhawaan kasoo yeeray Mid kamida xildhibaanada Baarlamaanka Kenya kaas oo sheegay in Uhuru Kenyatta uu yahay Soomaali!
Inta badan siyaasiyiinta maqaar saarka ah ee soomaalidu waxay ku hadlaan war ay ku raalli gelinayaan kuwa ay sida daacadda ah ugu adeegaan geesta kalena ay ku baadiyaynayaan bulshada soomaalida oo ay tubta saxan uga leexinayaan.
Aadan Barre Ducaale wuxuu ka mid d yahay soomaalida Kenya gumeysato ee loogu sheekeeyay in ay kenyaati yihiin.
Waa xildhibaan ka tirsan Baarlmaanka Kenya iminkana waxa uu ku howlan yahay olalaha madaxweynaha Kenya Uhuru kenyaata iyo saaxiibadiis ku doonayaan in ay kuraasta ku difaacdaan maadaama doorasho soo sacoto.
Uhuro kenyaata waa nin kirishtaan ah oo ka dhashay qabiilka kuukuuyo laakiin Aadan barre Ducaale waxa uu dadka ka dhaadhicinayaa in uu kasoo jeedo qabiilka daarood oo kamid ah qabaa'illada Soomaaliyeed arrinkaasi oo dad badan ay la yaabeen.
Arinta la yaab kale leh ayaa ah in Uhuru Kenyatta uu madaxweynaha dowladda Federaalka ah u sheegay in uu yahay Nin doorood ah asiguna ku yiri "fariid baad tahay aniguna waxaan ahay daarood ee adna soo gal”.
Qisadan waxaa ka sheekeeyay Ninka dabadhilifka ah ee lagu magacaabo Aadan Barre Ducaale kaasi oo sida muuqata isku dayaya in shacabka ku dhaqan Jubbooyinka iyo NFD uu si toos ah dowladda Kenya gacanta ugu geliyo.
Indheer garadka beesha la ifaajeeyey ee la lagu suntay in Uhuru ka dhashay ayaa seefta gasha kala baxay waxaanay ku hadleen erayo nool oo muujinaya sida ay xajiimoodeen weerarka qallafsan ee fagaaraha lala soo joogsaday.
Waxgaradkan oo u warramay Idaacadda islaamiga Alfurqaan ayaa sheegay in warka kasoo yeeray Uhuru iyo Aadan Barre Ducaale uu yahay mid been abuur ah islamarkaana qabiilka daarood yahay qabiil muslim ah oo taariikh fac weyn leh.
Halkan ka dhageyso Beenta Aadan Barre iyo Jawaabta Daarood MP3
Isha Maqalka: Radio Alfurqaan
Wadahadalladii ku aadanaa qeybsiga Biyaha Webiga Niil oo Fashil ku dhammaaday.
Dr. Suldaan Garyare "Itoobiya waxay Cagta Saartay Wadadii Burburka" Dhageyso.
Uhuru Kenyatta oo xilka qaadis ku sameeyay Aadan Barre Ducaale.
Jaajuus u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka oo lagu dilay degmada Aadan Yabaal.
Cali Jayte Cusmaan oo inqilaab aan dhiig ku daadan kula wareegay xarumaha maamulka Hiiraan.
Cudurka Carona oo Xabsiyada Iiraan Kasii Daayay In Ka Badan 50 Kun oo Qof!!
Maxamuud Sayid Aadan iyo Cabdi Rashiid Janan oo abaabul dagaal ka wada gobolka Gedo.
Uhuru Kenyaata oo dhaleeceeyay Weerarkii Askarta badan lagu dilay ee Wajeer.
Maxamuud Sayid Aadan oo loo diiday in uu galo magaalada Beled Xaawo.
Farmaajo oo kulan laqaadan doono Uhuru Kenyatta.
Daawo Sawirro: degmada Jilib oo si heer sare ah looga dabaal degay Munaasabadda Ciidda.
31/07/2020 - 14:40:42
Sawirro: Magaalada Buq Aqable oo si heer sare ah looga oogay Ciidul Adxaa.
31/07/2020 - 12:15:49
Video+Sawirro: Magaalo katirsan dalka Itoobiya oo ku gubatay dagaallada waddooyinka.
15/07/2020 - 11:36:49